Baolina Kitra-As Adema : Nosoloina an’i Raux Auguste ry Raniry sy Jhonny
Najanona tsy ho mpanazatra ny AS Adema intsony nanomboka omaly i Nirina Andrianjoelison sy Jhonny Rakotondramanana, izay nitantana io ekipa io tao anatin’ny roa taona mahery kely.
« Ny fivoahan’ny resaky ny Staff teknika tany amin’ny gazety no isan’ny nanamafy orina ny fanesorana an’i Nirina Androanjoelison sy Jhonny Rakotondramanana », araka ny nambaran’i Rivomparany, sekretera jeneralin’ny klioba AS Adema.
Ny faharesen’ity ekipan’Ivato ity nanoloana ny Ajesaia, ny alarobia lasa teo, ka tsy naha tompondakan’Analamanga azy ireo, no isan’ny nahafeno ny kapoakan’ireto Staff Teknika ireto. Hatreto dia fandresena 10 sy ady sahala 2 ary faharesena 5 no azon’ny AS Adema teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga 2011.
« Efa niandrasan’izy ireo kendritohana efa ela izy ity. Ny mampalahelo ahy fotsiny dia hain’izy ireo ny nampiantso ahy tany amin’ny biraony tamin’ny naka ahy. Rehefa handroaka ahy anefa izy ireo dia teny amin’ny kianja no namoahana ny resaka », hoy i Nirina Andrianjoelison na Raniry tamin’alahelo, nitsara ny fomban’ireto mpitantana ny klioban’Ivato seranana ireto.
Notsiahiviny fa efa nitranga izany tamin’ny andresen’ny AS Adema ny Vesta farany sy tany Afrika Atsimo nanoloana ny Bidvest Wits. Naneho ampahibemaso ihany koa ireo mpitantana ny AS Adema teto fa « fifanampiana teo amin’ny Adema iray manontolo no nahazoana ny vokatra tsara tamin’ny fifaninanana Afrikanina ».
Efa nitantana an’ity klioba ity i Raux Auguste talohan’ny nifindrany tany amin’ny USJF tamin’ny fotoan’androny. Farany teo dia nanampy ny Iarivo Football Club izy, ka tanjona napetraka tamin’izany « ny hanalana ny IFC hiala tao amin’ny faritra mena mety hidinana ho diviziona faharoa ». « Efa nahazo tso-drano tany amin’ny mpitantana ny IFC aho », hoy i Raux Auguste.